vane mweya mota, pneumatic mota typation, 10 hp pneumatic mota
vane mweya mota, 10 hp pneumatic mota kutaurwa
Mota Motors - Pneumatic Motors
Injini yemhepo (pneumatic mota) kana yakatsikirirwa mweya injini imhando yemotokari inoita zvemishini nekuwedzera mweya wakadzvanywa. Magetsi emhepo anosunga yakachengeteka, inovimbika simba remhepo yakamanikidzwa kuti ibudise torque uye kutenderera kufamba. Akawanda akasiyana magadzirirwo aripo. Unogona kuwana pneumatic mota kududzirwa pano uye isu tinogona kukupa iwe unonyanya kushanda mhepo mota, 10 hp pneumatic mota kana
am425 mhepo mota, kana kana vane mweya mota.
Anofambisa sei mota mota?
Kuita kwemota yemhepo kunoenderana nekupinda mudzvinyiriro. Pane inogara ichipinda mudzvanyiriro, mweya mota dzinoratidza hunhu mutsara wekubuda torque / kumhanya hukama. Nekudaro, nekungorongedza mweya wekugovera, uchishandisa nzira dzekutambisa kana yekumanikidza mutemo, kuburitsa kwemhepo yemhepo kunogona kuchinjika nyore.
Chii chinorehwa nemhepo mota mune pneumatic system?
Iyo pneumatic mota inokwenenzvera inokwenenzvera kuita kwayo uye inowedzera hupenyu hwezvinhu zviri kuita basa iri mune pneumatic system painenge ichishanda sekukwanisawo kune yayo yakamhanyisa kumhanya (50% yeiyo yakamhanyisa isina basa). Iyo chiyero chesimba chiri nani munzvimbo ino, nekuti mweya wakamanikidzwa unoshandiswa nemazvo.
Uyu modhi nemapiston? Chokwadi, edu akajairwa mamodheru ane mapiston. unoita here mamwe mamodheru emhepo mota? semuenzaniso nekutora panzvimbo pemapiston?
Hongu, izvi zvinogona kuchengetwa. Neine vane kana pisitoni modhi iyo ine kudzikisira mune huru mota shaft kumhanya.
Iyo pneumatic mota kutaurwa
Iyo mota ichashandiswa inofanirwa kusarudzwa nekutangisa ne torque inodiwa pane imwe nhambo yekumhanyisa. Mune mamwe mazwi, kusarudza iyo mota yakakodzera, iwe unofanirwa kuziva kumhanya kunodiwa uye torque. Sezvo simba rakanyanya rinosvika pahafu yemahara mota, mota yacho inofanirwa kusarudzwa kuitira kuti iyo pfungwa yakatarisana iri pedyo nekukosha kwesimba rakanyanya remota.